Theories & Practices of Federal Countries(Intermediate)Batch-6- PAÑÑĀ Online School
Ferry To Success
American Hospitality Institute Myanmar
Ministry of Planning, Finance and Industry
IT for Management
Certificate & Fellowship (NGOs)
Friedrich Naumann Foundation
Theories & Practices of Federal Countries(Intermediate)Batch- 6
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသီးသီးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူများ၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကို လေ့လာနေသူများ၊ နိုင်ငံရေးမူဝါဒများအားလေ့လာနေသူများ၊ ဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများအား လေ့လာနေသူများ၊ ပါတီနိုင်ငံရေးတွင် တတ်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူများ၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးဖလှယ် လိုသူများ၊
ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အခြေခံသဘောတရားများ၊ အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများသာမက ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုပုံစံများ၊ အများပါဝင်နိုင်မှုအားကောင်းသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ စုံလင်ကွဲပြားမှုများနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံများအား ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် ချိန်ထိုးလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သာမက ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့် ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှရေး၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဟူ၍လည်း လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Daw Su Lei Naing
Bachelor of Computer Science, Diploma in Anthropology
Trainer and Civic Educator
Su Lei Naing has graduated from the University of Computer Studies, Yangon, specialized subject was Computer Science, B.C.Sc at 2011 and B.C.Sc (Honor) at 2012. She has gotadiploma of anthropol... More
Training facilitator, civic educator and dialogue facilitator
A devoted training facilitator with the experiences of delivering training for federalism, peace, civic education, voter education and personality development over7years. Joshua has undertaken sever... More
U Tun Min Oo
MBBS (UMM) MPP ( KDI School of Public Policy and Management, Korea)
Trainer & Program Manager at Forum of Federations Myanmar Office
U Tun Min Oo is working at the Forum of Federations Myanmar Office as Program Manager. He earned bachelor degree at the University of Medicine Mandalay in 2011. In 2017, he completed Master of Public ... More
U Naw Mai
Diploma in Mechatronic Engineering and Bachelor of Computer Technology (B.C.Tech)
Training Facilitator for Federalism and Civic Education
U Naw Mai is currently working as freelance training facilitator for federalism and civic education. He earned bachelor degree of computer technology from University of Computer Studies, Yangon in 200... More
U Zay Yar Lin
BA(Eco), Dip of Marketing
Project Communication Officer
Zayar Linn isaTrainer and Project Communication Officer at Pañña Institute. Zayar graduated B.A(Economics) at the Dagon University and Post-Graduate Diploma in Marketing from Yangon University of Ec... More
U Htet Min Lwin
MBBS (UMM), MPS (Central European University, Budapest, Hungary)
Country Representative, Forum of Federations
Htet Min Lwin is Country Representative – Myanmar for the Forum of Federations, an international organization working on federalism and devolved governance. Asastudent, he was actively involved in s... More
U Aung Naing Maw
Diploma in Research Studies and Bachelor of Business Administration (B.B.A)
Assistant Project Manager and Civic Educator
Aung Naing Maw is working as Assistant Project Manager and Senior Trainer at the Paññā Institute since 2016. He hold the Bachelor of Business Administration (B.B.A) and Diploma in Research Studies fro... More
Faculties : U Aung Naing Maw|;|3161
Commitment : 1 Hr
ယခုသင်ခန်းစာတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ သဘောတရား၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပုံစံများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပုံစံများလေ့လာသိရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဆိုသည့်အချက်ကို ဆက်စပ်သိရှိသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
7 Video(s), 1 Reading(s)
Understanding Federalism (PDF)
01- Understanding Federalism Part 1
02. Understanding Federalism Part 2
03. Understanding Federalism Part 3
04. Understanding Federalism Part 4
05. Understanding Federalism Part 5
06. Understanding Federalism Part 6
07. Understanding Federalism Part 7
Diversity Management in Federalism
Faculties : Saw Joshua|;|6089
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရာတွင် ပထဝီနယ်နမိတ်ကြီးမားကျယ်ပြန်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲပြားခြား နားသော လူမျိုး ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် နောက်ခံသမိုင်းများရှိသည့် လူမျိုးများစုပေါင်းနေထိုင် ကြခြင်းတို့သည် အခြေခံအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒုတိယအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သော ကြောင့် လူမျိုး အသွေးအရောင်စုံလင်သည့် အားလျော်စွာ၊ သဘောာထားအမြင်များလည်းကွဲပြားမှုရှိမည်သာဖြစ် သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေနေတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသူတို့အနေဖြင့် ကျယ်ပြန်သောသဘောထားရှိရန် လွန်စွာ အရေးကြီးသလို ကွဲပြားခြားနားမှု၊ မတူညီမှုတို့ကို အရှိတရားအဖြစ်လက်ခံအသိမှတ်ပြုကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားမှု ကို မတူအောင်ညှိခြင်းသည် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ၍ ဖြစ်ပေါစေနိုင်းကြောင်း အနှစ်ချုပ်အနေနှင့် ဖော်ပြ အပ်ပါသည်။
6 Video(s), 1 Reading(s)
Diversity Management (PDF)
01. Introduction To Diversity Management In Federalism
02. Diversity Management ( Intermediate ) ( Part 1 )
03. Diversity Management ( Intermediate ) ( Part3)
04. Diversity Management ( Intermediate ) ( Part 4)
05. Diversity Management ( Intermediate ) ( Part 5)
06. Diversity Management ( Intermediate ) ( Part 6)
Distribution of Power in Federalism
Faculties : U Naw Mai|;|6103
ကနဦးအနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အမျိုးအစားများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေပုံ အခြေခံသဘောတရားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ထို့နောက် အရေးပေါ်(ဖက်ဒရယ်မဆန်သော) အခွင့်အာဏာများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို နိုင်ငံတကာဥပမာများနှင့် ဆွေးနွေးမှာဖြစ်သလို အာဏာခွဲဝေမှုတွင် တစ်ဖက်သတ်လွှမ်းမိုးသော အခြေအနေနှင့် အတူညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရသောအခြေအနေများကိုလည်း ဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လက်တွေ့အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုတွင် အပြိုင်သဘောအာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးမှုကို ဖြစ်ရပ်လေ့လာသုံးသပ်မှုအဖြစ် ကနေဒါနိုင်ငံကို လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘော အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးမှုကို ဖြစ်ရပ်လေ့လာသုံးသပ်မှုအဖြစ် ဂျာမနီနိုင်ငံကို လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
DOP Inter (Naw Mai) - PDF
01. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part 1)
02. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part 2)
03. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part 3)
04. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part4)
05. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part5)
06. Distribution Of Powers (Dop) In A Federal System(Intermediate) ( Part 6)
Fiscal Federalism (Case Study)
Faculties : U Tun Min Oo|;|6102
•	ဖက်ဒရယ်ဘဏ္ဍာရေးစနစ် ဆိုတာ ဘာလဲ? အဓိက အစိတ်အပိုင်းက ဘာတွေပါသလဲ?
•	အသုံးစရိတ်တာဝန်ခွဲဝေခြင်း၊ အခွန်တာဝန်ခွဲဝေခြင်း၊ အစိုးရအချင်းချင်းကြား လွှဲပြောင်းပေးငွေများအား ဥပမာများဖြင့် လေ့လာခြင်း
•	ဖက်ဒရယ် ဘဏ္ဍာရေးစနစ်အတွက် လိုအပ်သော အင်စတီကျူးရှင်းများ
•	မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်အစီအမံများ
5 Video(s), 1 Reading(s)
FF - Principles and Case studies (PDF)
01. Expenditure Assignments
02. Taxation Assignments
03. Intergovernmental Transfers
04. Intergovernmental Transfer (Case Study)
05. Equalization Transfer
Local Government in Federalism
Faculties : U Zay Yar Lin|;|6105
ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအကြောင်းပြောကြသည့်အခါ ဒေသန္တရအစိုးရများသည် အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ဒေသန္အစိုးရများသည် လူထုနှင့်အနီးစပ်ဆုံး အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဖြစ်ပြီးအခြေခံလူမှုဘဝနှင့်ဆိုင်သည့်အရေးကိစ္စများကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ယခုသင်ခန်းစာတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများတွင် ဒေသန္တရအစိုးရများ၏အရေးကြီးပုံ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောနိုင်ငံများတွင် ဒေသန္တရအဆင့်အစိုးရများ၏ ဆောင်ရွက်ပုံများ နှင့် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက် နိုင်ငံများတွင် ဒေသန္တရအစိုးရများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို နိုင်ငံတကာ ဥပမာ (Case Study) များနှင့် တကွ ဆွေးနွေးဖော်ပြထားပါသည်။
Local Government in Federal System (PDF)
Gender Equality in Federalism
Faculties : Daw Su Lei Naing|;|6055
ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးစနစ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ သဘောထားများ၊ လက်တွေ့ခွဲဝေကျင့်သုံးမှုများကို တိုး၍ ဆွေးနွေးလေ့လာသုံးသပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိနေသော သဘောတရားများစွာ ရှိနေသည်ကိုလည်း အတန်အသင့် သိထားကြပြီး ဖြစ်မည်ယူဆပါသည်။ ယခင် ကျား၊မ တည်ရှိမှု၂မျိုးတည်းရှိနေရာက ယခုအခါ လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားမှုအလိုက် ဖြစ်တည်လာသောအုပ်စုများလည်း ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်မှု စနစ်တွင် လူအြဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဂျန်ဒါအရေးကို ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သနည်း၊ မည်သို့ချိတ်ဆက်နေသနည်းဆိုသည်ကို စဥ်းစားရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ယခုဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဂျန်ဒါသဘောသဘာဝ၊ အခန်းကဏ္ဍများနှင့်အတူ နိုင်ငံတော်ဘက်မှ လုပ်ဆောင်နိုင်သော အပိုင်းများ၊ နိုင်ငံတကာတွင် ဂျန်ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အစီအမံများ မည်သို့ထားရှိကြသနည်း စသဖြင့် အကြောင်းအရာ စုံလင်စွာတင်ပြဆွေးနွေးထားပါသည်။
Gender and Federalism (Intermediate)
04- Part 4
05- Part 5
Constitution, Federalism and Peace in Myanmar
Faculties : U Htet Min Lwin|;|6376
•	ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ
•	ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ဒီမိုကရေစီ အချိတ်အဆက်
•	ဖွဲ့စည်းပုံပဓာန၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲ
•	ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ် အချိတ်အဆက်
•	လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေများ
Constitution, Gender Equality and Federalism (PDF)
01. Constitution, Gender Equality And Federalism ( Part 1 )
02. Constitution, Gender Equality And Federalism ( Part2)
03. What About Democracy
05. Constitutionalism ( Part2)
Paññā Online School သည် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Paññā Institute မှ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက် သုံးစွဲသူ လူ့အသိုက်အဝန်း အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အွန်လိုင်းပေါ်မှတဆင့် အဆင်ပြေ ချော့မွေ့ လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပို်းမှုဖြင့် တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
© 2018 PAÑÑĀ. All rights reserved.
PAÑÑĀ Online School - Payment Policy